सलमान खानको पूर्व प्रेमिकाले गरिन् खुलासा, ‘म माथि ३ पटक…. – News Nepali Dainik
सलमान खानको पूर्व प्रेमिकाले गरिन् खुलासा, ‘म माथि ३ पटक….
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २९, २०७७ समय: १२:२४:१२
एजेन्सी । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको पूर्व प्रेमिकाले एक ठूलो खुलासा गरेकी छन् । उनले आफुलाई जिवनमा ३ पटक शो ष ण मा परेको बताएकी छन् । ,
पाकिस्तानबाट भारत आएपछि अभिनेत्री सोमी अलीले बलिउडमा करियरका बारेमा कुरा गर्दै यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । उनी कुनै बेला सलमान खानको प्रेमिका थिइन् । सोमीले सन् ९० को दशकमा बलिउडमा करियर बनाएकी थिइन् । उनी सलमान खानले ‘मै प्यार क्या फिल्म हेरेर उनै संग विवाह गर्छु भन्दै भारत आएकी थिइन् ।
यस पछि दुबै साथी बन्न पुगे र सोमी सलमानकी गर्लफ्रेन्ड पनि बनिन् । सलमानसंगको प्रेम सफल नभएपछि अहिले सोमीले आफूलाई सिनेमाबाट धेरै टाढा राखेकी छन् । सोमी अहिले अमेरिकामा आफ्नै एनजीओ चलाउँछिन्।
हालसालै, सोमीले समस्यामा परेका महिलाका बारेमा आवाज उठाएकी छन् । आफु पनि त्यस्तै समस्या भोगेका कारण महिलालाई सहयोग गर्न अघि बढेको बताएकी छन् । हालसालै उनले भनिन् कि उनी आफैंले यसको शि का र भइन्। सोमीको यो खुलासा अचम्मलाग्दो छ।
एक अन्तर्वार्ता दिएको छ र यसमा आश्चर्य लाग्दो खुलासा गरिएको छ। अभिनेत्रीले उनलाई ५, ९ र १४ वर्षको उमेरमा शो ष ण भएको बताएकी छन् । यति मात्र होइन, अभिनेत्रीले भनेकी छ कि उनलाई यो सत्य बताउन धेरै समय लाग्यो ।
तर १४ बर्ष देखि सामाजिक काममा सकृय भएका कारण आफ माथि नै भएको घटना लु का उ नु उनलाई न्याय संगत लागेन । त्यसैले अहिले खुलासा गरेको बताएकी छन् ।
अभिनेत्रीका अनुसार, जब म ५ बर्षको थिएँ, पहिलो चोटि मेरो शो ष ण भ/एको थियो। आफ्नो आमाबुवालाई यो कुरा सुनाउँदा कसैलाई नभन्नु भनेर चुप लगाइयो । पाकिस्तान र भारतीय संस्कृतिमा छोरीको इ ज्ज तलाई महत्व दिइन्छ । त्यसपछि घटनाहरू ९ बर्षको उमेरमा र त्यसपछि १४ वर्षको उमेरमा पनि भयो ।
जब सलमान खानको फिल्म आई मैने प्यार किया आयो त्यतिखेर सोमी १६ वर्षको थिइन। सोमीले सलमानको यो फिल्म हेरेपछि सलमानसंग नै विवाह गर्ने निश्चय गरिन् । उनी अमेरिकावाट सलमानसंग विवाह गर्न भन्दै भारत आइन् । उनी त्यती बेला आमाबुवालाई ढाँ टे र भारत आएकी थिइन् ।
Last Updated on: March 13th, 2021 at 12:24 pm